Azonao atao ny manasa akanjo amin'ny milina fanasan-glasy - ahoana ny fomba fanasana ny rindrina, ny cashmere, ny volom-borona?
Afaka manasa ny akanjoko amin'ny milina fanasan-damba aho - toro-làlana ho an'ny fanasana azo antoka sy mahomby
Ny fanontaniana dia hoe raha azo atao ny manasa akanjo amin'ny milina fanasana ho an'ny maro, rehefa tonga amin'ny kabinetra ny fahatongavan'ny andro mangatsiaka, dia mazava fa tokony hapetraka ny akanjo ivelany. Raha tsy misy mari-pamantarana miaraka amin'ny koveta mivezivezy eo amin'ny labozia, dia midika izany fa tsy azo atao afa-tsy ny fanadiovana maina fotsiny ihany, afaka manararaotra anao ianao.
Azo atao ve ny manasa akanjo amin'ny milina fanoratana?
Ny fomba tsara indrindra hamerenana ny akanjo ambony amin'ny endriny tany am-piandohana dia ny mandeha any amin'ny mpanadio maina. Saingy mety tsy ho an'ny maro izany safidy izany. Noho izany, ny fanontaniana amin'ny hoe mihodina ao anaty milina fanoratana ny akanjo mipoitra eny amin'ny arabe. Ity safidy atao amin'ny fanadiovana ity dia azo ampiasaina raha mahita karazana nuages:
Esory tsara ny akanjonao eo amin'ilay milina fanodinana. Alohan'ny hitenenana dia zava-dehibe ny mandalina ny fampahalalana rehetra momba ny fiahiana eo amin'ilay marika.
Azonao atao ny manasa azy amin'ny akanjo iray tsy manana alika mandràra ny fampiasana ny fako. Zava-dehibe fa misy ampahany vetivety ny vokatra - mety hanjary tsy azo ampiasaina izy ireo.
Alohan'ny hanombohana ny fanasana, ny totozy dia tokony hojerena amin'ny loko marevaka, indrindra raha be varia.
Ny famokarana menaka alohan'ny hanombohana ny dingana dia tsy maintsy afoy na kapila. Raha tsy azo atao izany, dia ny valin'ny fanontaniana dia ny hanasa ny palitao amin'ny sisiny ao amin'ny milina fanasana - ratsy, tsara kokoa ny mandà ny fanadiovana toy izany.
Ahoana ny fomba hanasana akanjo amin'ny milina fanoratana?
Ny tena manan-danja dia ny famaritana ny raharaha, izay avy nohavaozina. Avy amin'ny hatsarany sy ny hetsika manaraka no miankina. Misy fitsipika ankapobeny ny fanasana ny akanjo:
Alohan'ny fomba fitsaboana, esory ny singa avy amin'ny metaly avy amin'ny vokatra, ka tsy misy plastika maitso eo amin'ny lamba. Mila manakaiky ny famerenana sy ny fifadian-kanina.
Ny tara-paharetan'ny fikojakojana fidiovana dia 40 ° C, indraindalana kely.
Avy amin'ny vokatra fanasana, dia tsara ny misafidy ny shampoosan'ny ankizy tsy misy pensilihazo na fitoko ho an'ny lamba malemy.
Ampiasao imbetsaka kokoa ny zavatra, ka tsy misy fisarahana mavo.
Ny fanasana ny akanjo amin'ny milina fanasan-damba dia atao amin'ny "fomba malefaka", ny familiana dia tsy mavitrika.
Ny fanamainana dia voafaritra amin'ny karazana fitaovana - eo amin'ny soroka na eo amin'ny planeta horita.
Ny fandrindrana dia zavatra tsy azo atao, amin'ny alàlan'ny gaza dia tokony hitsiry haingana.
Ahoana ny fomba hanasana akanjo matevina amin'ny milina fanodinana iray?
Io karazam-batana amin'ny fomba fanasana io dia tena mitaky ezaka. Raha maloto ny akanjo na ny sisin'ny vokatra, dia tsara kokoa ny manasa ireo faritra ireo amin'ny savony sy savony. Raha tsy afa-po amin'ny vokatra ianao, dia azonao atao ny maka ilay entana amin'ny milina, manadino ny fitsipika tsotra:
Ny fanasana ny akanjo vita amin'ny lamba fanasana amin'ny milina fanasana dia atao amin'ny hafanana tsy mihoatra ny 30 ° C, tsara kokoa ny mametraka 15-20 ° C.
Tsy maintsy esorina ny fomba fitiliana.
Raha misy fizarana mipetaka amin'ny vokatra, dia tsara kokoa ny tsy mitarika ny dingana.
Azonao atao ny manety ilay zavatra eny an-tsorokao indray avy eo, ary mitondra azy amin'ny loto mafana amin'ny alalan'ny paompy.
Ahoana ny fomba hanasana akanjo lavarangana amin'ny kapila iray?
Ny fitaovana avy amin'ny cashmere dia tena kiraro, mba tsy hikoriana ilay zavatra, afaka manasa izany eo an-toerana ianao. Ilaina ny manadio ny rano amin'ny rano mangatsiatsiaka, mamaivay ny sponjy ary manosotra ny toerana maloto. Mba tsy hisehoan'ny fisarahana, tsy tokony hifantoka ny vahaolana. Ny vokatra avy amin'ny 100% cashmere dia tsy maintsy hosasana amin'ny tànana. Ara-dalàna ny mampiasa ny fitaovana hanalana volo, aorian'ny fitsaboana, tokony hosasana amin'ny rano mangatsiaka izy ireo. Raha asiana endri-pandrefesana eo amin'ny labozia ny fanasana masinina dia azo atao ny manamarika ny fitsipika toy izany:
Ny fanasana ny akanjo kapoaka any amin'ny milina fanasan-damba dia atao amin'ny hafanana tsy mihoatra ny 30 ° C.
Ny soso-kevitra dia ny fampiasana tsotra indrindra amin'ny fomba fanasan-drivotra malemy.
Tsy soso-kevitra ny famenoana. Rehefa manangom-bokatra dia aza manodinkodina ny lamba, fa asehoy amin'ny sandrinao amin'ny tanana.
Fanondrahana - horizontaly, arahin'ny fiovan'ny fitaovana rehefa mahamamo. Rehefa maina ny ankamaroan'ny fanasitranana, dia azo ahantona amin'ny hanger ilay zavatra.
Ahoana ny fomba hanasa lamba volonondry amin'ny milina fanasana?
Fitsipika momba ny fanasana ny akanjo amin'ny akanjon'ny lobaka ambony:
Ny fampiasana rehefa manasa volo dia fanala manokana na kapsules amin'ny gel ho volon'ondry.
Ny fanasana akanjo volon'ondry amin'ny milina fanasan-damba dia atao amin'ny 30 ° C, raha toa ka latsaky ny 90% ny votoatiny dia afaka mametraka ny 40 ° C.
Azonao atao ny mandrindra programa tsy miova afa-tsy ny fanodinana, ny fihodinana ary ny fandosirana.
Sasao ny lambam-pandriana misy ny volon'ondry eo ambonin'ny soroka, manangona ny vala rehetra.
Vetivety dia mateza amin'ny vy avy amin'ny gaza izany, ary mafana ny hafanana mafana amin'ny vy. Dia atsangano indray ny trembler mba ho maina.
Taorian'ny nanasana, ny akanjo volon'ondry vilany - inona no tokony hatao?
Tsy mahagaga raha misy toe-javatra izay, rehefa tsy miraharaha ny toro-hevitr'ilay mpanamboatra an'ilay mari-pamantarana, dia mametraka ny endriny voalohany ny akanjo, mametraka azy. Raha ny akanjo volon'ondry vilany rehefa manasa dia azonao atao ny manandrana mampiasa azy amin'ny fomba iray:
Atsofohy ao anaty vilany misy rano mafana 30 ° C, ampianaro 3 tbsp. ranom-boankazo, 2 tbsp. tavoahangy misy alikaola sy menaka ary manempotra. Apetaho amin'ny 40 minitra ny palitao, ary alaivo ilay izy, atsofoka ao anaty rano miaraka amin'ny hafanana mitovitovy aminy, ary asio kely kely, aforeto eo amin'ny teboka tsara ary esory miaraka amin'ny lamba.
Azonao ampiasaina ny peroxyde hydrogène - 2 tbsp. Sakafo 10 litatra mafana. Ny akanjo dia mametraka vahaolana, manome azy moramora tsara ary miala amin'ny ora 2. Aorian'izany dia manasà sy mafana amin'ny fanjakana marindrano, rakotra lamba tery.
Fanaovana fitsaboana mahazatra
Ny lakan-damba ao amin'ny trano - inona no fomba fiady mahery indrindra?
Ahoana ny fomba hanasana ireo valin-drihitra any an-trano?
Ahoana ny fomba hanadiovana mikraoba ao anaty - fomba haingana
Fahavetavetana ao an-trano - fomba hanafoanana
Fanadiovana ny volafotsy amin'ny amoniaka
Ahoana ny famongorana ireo kongona ao anaty trano?
Ultrasound avy amin'ny totozy
Lalao ho an'ny 3 taona
Ny toerana tsara indrindra amin'ny fiaramanidina
25 rakitsary hafahafa voarakitra ao amin'ny boky Guinness Records
Fitsaboana hepatita C miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Kisoa ho an'ny boaty misy diloilo maina
Gymnastics ho an'ny vozon'i Shishonin
Ajika avy amin'ny plastika serizy - fiomanana amin'ny ririnina
Rano misy dibera
Fitsaboana chlamydia miaraka amin'ny fitsaboana ataon'ny vahoaka
Inona no nofinofin'ny vehivavy bevohoka?
Afindrano ho an'ny mpanadio vaksiny
Tsy matory tsara ilay zaza
Famaranana boards: karazana
Ahoana no itiavan'ny olona ny fitiavana?
Toy Terrier sy Chihuahua - fahasamihafana
Ultrasound of the joint
Jeans - Summer 2014